BITCOIN DUMP INCOMING?! $5K - $4K NEXT?! 💥❗️ LIVE Crypto Analysis TA & BTC Cryptocurrency Price News - crypto လမ်းညွှန်
နေအိမ် အကြံပြုချက်များ BITCOIN DUMP INCOMING?! $5K – $4K NEXT?! 💥❗️ LIVE Crypto Analysis TA & BTC Cryptocurrency Price News
Tags Bitcoinခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Bitcoinbtc Bitcoincrypto Bitcoincryptocurrency Bitcoinbitcoin dumpတိုက်ရိုက်လွှ Bitcoinသတင်း Bitcoinသတင်းယနေ့ Bitcoinစျေးနှုန်း BitcoinBitcoin သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Bitcoinယနေ့ BitcoinBTCbtc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာbtc dumpတိုက်ရိုက်လွှ btcbtc သတင်းbtc စျေးနှုန်းbtc taယနေ့ btccryptocrypto analysiscrypto dumpcrypto livecrypto သတင်းcrypto pricecrypto tacrypto ယနေ့cryptocurrencycryptocurrency livecryptocurrency သတင်းcryptocurrency today
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:30 ညနေ
Faw Sya ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:31 ညနေ
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:32 ညနေ
B. Zinetto ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:34 ညနေ
man drax ကပြောပါတယ်:
Ya gotta love the astronaut moonboy effigy…ဟားဟား
Mighty Crypto ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:38 ညနေ
Fer Sand ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 26, 2020 တွင် 1:26 နံနက်
Turbo Nicko ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 26, 2020 တွင် 2:35 နံနက်
colin mckenzie ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 10:45 ညနေ
Razvan Pop ကပြောပါတယ်:
Sean Cheng ကပြောပါတယ်:
Ador Abel ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:18 ညနေ
မတ်လ 26, 2020 တွင် 12:46 နံနက်
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:12 ညနေ
Cam Rbz ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:20 ညနေ
Fernando Felix FIlms ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:22 ညနေ
Brian Lawler ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:36 ညနေ
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:51 ညနေ
George Stobbart ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 25, 2020 တွင် 11:55 ညနေ
Wesley Blount ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 26, 2020 တွင် 12:34 နံနက်
neset akilli ကပြောပါတယ်:
netsuj yenrav ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 26, 2020 တွင် 12:06 နံနက်
မတ်လ 26, 2020 တွင် 1:56 နံနက်
A drop is still coming so you will have time to get back in around 3850 သို့ 4400 in the next week or lots of FOMO at this point. Moon next👍
မတ်လ 26, 2020 တွင် 1:27 နံနက်
မတ်လ 26, 2020 တွင် 12:25 နံနက်